Indonesia oo sheegtay in aysan dalkeeda ka eryi doonin safiirka Syria – SBC
Indonesia oo sheegtay in aysan dalkeeda ka eryi doonin safiirka Syria
Jakarta :- wasiirka arrimaha dibadda dalka Indonesia ninka lagu magacaabo Marti Nataliijwaawa ayaa sheegay in xukuumadiisa aysan doonayn in ay weydiisato dublumaasiyiinta Syria in ay dalkooda dib ugu laabtaan.
Wasiirka ayaa tilmaamay in talaabada kadhanka ah ergada Syria ee dalalka dibadda ee qaar kamid ah yurubiyaanka iyo dowladda mareykanka ay qaateen aysan ahayn mid cabasho loogu gudbin karto nidaamka madaxweyne Asad.
Marti ayaa carbaabay in Wasaardisu ay u yeertay howlwdeenka safaaradda Syria ee dalka Indonesia si uu ugu cadeeyo mowqifka Indonesia ee xaaladda Syria .
Wasiirka ayaa intaas raaciyey in kulanka uu la yeeshay howladeenka Syria ay isla soo qaadeen xiriirka mustaqbalka labada dal.
Weerarkii wuxuushnimada ahaa ee lagu qaaday tuulada xawla ayaa lagu tilmaamay in ay ahayd middii ugu dhiig daashada badnayd tan iyo intii uu qalalaasaha ka bilowday dalka Syria muddo 15 bilood kaasi oo keenay dhimashada 108 qof oo rayid ah oo ay ku jiraan 49 caruur ah.
Dowladda Indonesia ayaa bilowday daad gureenta muwaadiniinteeda dalka ku sugan dalka Syria .
Tirakoobka rasmiga ee ay ssameysay wasaaradda arrimaha dibadda Indonesia ayaa lagu sheegay in 12 kun oo Indonesian ah ay ku nool yihiin Syria kuwaasi oo isugu jira arday, macalimiin iyo shaqaale .